Sheekada Filimka Mission: Impossible – Fallout: Tom Cruise taxanihii ugu xiisaha badnaa ayuu la yimid | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada Filimka Mission: Impossible – Fallout: Tom Cruise taxanihii ugu xiisaha badnaa ayuu la yimid
In la sameeyo filim kadibna guuleesto sidoo kalena taxane laga dhigo taxanahaas oo noqdana mid hirgalay oo dunida idil saameyn ku yeesho wey adag tahay.
Superstar Tom Cruise sanadii 1996 ayuu bilaabay sameynta filimka hirgalay Mission: Impossible wixii markaas ka dambeeyay dunida wuxuu baray in mashruucaan la joogteen karo.
Haatana wuxuu la yimid qaybta lixaad ee loo bixiyay Mission: Impossible – Fallout wuxuuna lasoo laabtay doorkiisa caanka ah Ethan Hunt iyo bandhigiisii Classic ahaa.
Jilaayaasha Filimkan: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Angela Bassett, Michelle Monaghan, Alec Baldwin.
Qiimeynta Filimkan: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay: Marnaba kama xiiso dhigysid doorka Tom Cruise xitaa haddii uu bilaabay sameynta taxanahan 22-sano ka hor, inaba caadi ma ahan fariinta filimkan qaabka la isugu daba riday iyo sida Tom doorkiisa Ethan Hunt ugu hagar baxay.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Xoogaa qaabka sheekada waxyaabaha naga qarsoon loo dhigay in la fahmo ayaa adag sidaa darteed waxaa wanaagsaneyn fariintiisa in laga dhigo meelaha qaar mid si sahlan loo fahmi karo ujeedka a xambaarsan tahay.
Fariinta Filimka Mission: Impossible – Fallout Oo Kooban: Taxanahan wuxuu ku bilaabanaa Ethan Hunt (Tom Cruise) oo u ku hawl jiro hawl gal uu rabo inuu gacanta ku soo dhigo hubka nugliyeerka ah madaxyadiisa oo suuqa maddow lagu iibiyo.
Laakiin Ethan Hunt marka uu hawl galkan ku guuleesan rabo labo darin mid dooro ayaa qabsaneyso oo ah inuu nolosha saaxiibkiis la shaqeeyo Luther (Ving Rhames) bad baadiyo ama inuu hubka Nugliyeerka gacanta kusoo dhigo.
Laakiin wuxuu dooranaa inuu saaxiibkiis bad baadiyo halkaasna waxaa ku fashilmaayo hawl galkii uu Nugliyeerka gacanta ugu soo dhigi lahaa.
Ethan Hunt (Tom Cruise) oo niyad jabsan waxaa soo gaareyso aqbaar ah in burcadka weyn Solomon Lane (Sean Harris ) dunidana waxaa soo wajaheyso halis aad u weyn.
Ethan Hunt (Tom Cruise) oo rabo inuu halista jirto ka hortago wuxuu caqabad kala kulmaa CIA-da oo dood ka keenayaan daacadnimadiisa iyo sida ay kaga go’antahay inuu hawl galkan horey usii wado.
Ethan Hunt (Tom Cruise) waqtiga ayaa kasoo horjeedo, CIA-da garab kama heesto waxaana ku raad joogaan kuwo isaga rabaan inay dilaan iyo kuwa isaga horey ula shaqeyn jireen oo noloshiisa dhibsadeen asigoo intaas caqabado heestaan ayuu haddana rabaa dunida inuu halis walbo ka bad baadiyo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan Caanka Ah: Director Christopher McQuarrie dhaliil walbo uu kala kulmay taxanahan markii uu qaybtiisii shanaad sameeyay wuxuu haatan isaga dhaqay habka wacan ee uu isugu daba riday qaybtaan lixaad.
Sida Action-ka loo diyaariyay sheekada la isugu daba riday iyo nuxurka taxanahan qaybtiisa lixaad loo yeelay ayaa ka dhigan inuu ka mid noqday qaybaha ugu wanaagsan ee taxanaha MI laga sameeyo qaybtaan lixaad.
Bandhiga Jilaayaasha: Waaw waa cajiib sida Tom Cruise qaybtan lixaad u sameeyay maba is badalaayo marwalbo oo uu taxanahan kasoo muuqdo siweyn ayuu ugu hagar baxaa markaana kuma sii jirto inkastoo da’diisa horey u badatay hadana weli xarakaadkiisii iyo Action-madii lagu yaqiinay isma dhimin waa mid kale oo uu amaan gaar ah ku mudan yahay.
Marka laga soo tago Tom Cruise oo ah ruuxda taxanahan dhamaan jilaayaasha kale ee kasoo muuqdeen mid walbo micno ayuu shaashada usoo galayaa sida Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Angela Bassett, Michelle Monaghan iyo Alec Baldwin.
Gunaanad: MI6 waa filim Action-kiisa si aan caadi ahayn loo sameeyay Tom Cruise u hagar baxay sheeko ahaana si wacan la isugu daba riday sidaa darteed mashruucaan kaliya waxaa la dhowri doonaa guusha lixaada leh ee uu suuq walbo caalamka ah ka gaari doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Mission: Impossible – Fallout:
Waxaa Aqrisay 1,162